China excavator ịwụ ezé emepụta na suppliers | MINYAN
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ n'ime ala na-echekwa akụkụ dị oke ọnụ nke bọket gị na ndụ ogologo oge na-ebelata ụgwọ mmezi gị. excavator ịwụ ezé na-ekere òkè dị ukwuu n'ịchọpụta otú igwe gị si arụ ọrụ na ngwa a kapịrị ọnụ.
Tụkwasịnụ IkikeTụkwasịnụ Ikike:500000 ton / Tọn kwa ọnwaNkwakọ ngwaahịa & nzipuNkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa: Igbe igbePort: Qingdao, Lianyungang, ShanghaiEtiti oge :
Ọnụ ọgụgụ (Kilogram)
Cketwụ ezé nkọwa:
Ihe onwunwe: Carbon ígwè, alloy steel, wdg, dị ka T1, T2, T3, T4.
Machine ụdị: Excavator, Wheel Loader, Bulldozer, wdg.
Echeta: BB BR ALL NILE
Okpomọkụ ọgwụgwọ: Quenching na temper ọgwụgwọ
Ekweghị ekwe: Ezé: HRC48-52, Uru mmetụta> = 16J; Ntughari: HRC34-38, Uru mmetụta> = 25J
Ọnọdụ ọrụ: na magburu onwe elongation na ike ọdụdọ, otú nnọọ adabara ọtụtụ dị iche iche na-arụsi ọrụ ike na ọnọdụ.
Bọket ezé nkọwa:Anyị tumadi na-enye ndị Excavator akụkụ ahụ mapụtara. Dị ka excavator rock ịwụ, excavator sieve ịwụ, excavator ịwụ ezé, excavator ripper, ịcha n'ọnụ, excavator ngwa ngwa coupler na na. Dị anyị nwere ike ịnye ụdị niile. Ahịa anyị bụ ụwa niile, dịka USA Canada, South Africa, Brazil, Chile, Egypt, Sudan, Singapore Middle East. wdg. ọkachamara na-ewu ígwè ọrụ akụkụ dị ka ịwụ ezé, excavator ripper, ịcha n'ọnụ, excavator ngwa coupler na na. Ihe: Carbon nchara, alloy steel, wdg, dị ka T1, T2, T3, T4.Machine ụdị: Excavator, Loader, Bulldozer, wdg. uru> = 16J; Ntughari: HRC34-38, Mmetụta mmetụta> = 25J Ọnọdụ ọrụ: ya na elongation magburu onwe ya na ike ọdụdọ, ya mere dabara adaba maka ọtụtụ ọrụ siri ike dị iche iche
Anyị nwere ike inye ọtụtụ ụdị Excavator Bucket Ezé:
Usoro ngwaahịa1. Nlụpụta Technology: nkenke Nkedo2. Akụrụngwa: Alloy Steel3. Anyị nkenke mgbatị ngwaahịa ịmụta sodium silicate mgbochi mmiri wax mgbatị usoro, akpaka akara nke okpomọkụ ọgwụgwọ, drenched ịgba agba na akpaka ihicha usoroUru1. Ọtụtụ afọ ahụmahụ na injinia ígwè ụlọ ọrụ.2.Our isi ahia: China dum, Middle East, Africa, South Africa, America wdgỌ bụghị naanị ire ngwaahịa ahụ, kamakwa ọ nwere ike ịmepụta dị ka arịrịọ ndị ahịa.4. Na ọtụtụ ngwaahịa. Yellow, green, agba maka nhọrọ.5. Ogo bụ nke ndị ọkachamara mara ndị ọrụ, ndị ọrụ na-akwụwa aka ọtọ na ndị otu QC.6. Factory price, magburu onwe ya mma, ọkachamara ọrụ.7. Anyị nwere ike tinye gị onwe gị logo na ika na ngwaahịa na nnukwu ibu.8.Short nnyefe oge: 30 ụbọchị kwa 20ft akpa.
Jụọ ma zaa Q: you na erekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ emeputa?A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Q: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị?A: N'ozuzu ọ bụ ụbọchị 5-10 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa. ma ọ bụ na ọ bụ 15-20 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwongwo na-adịghị na ngwaahịa, ọ bụ dị na nke ukwu.Q: you na-enye ihe atụ? ọ bụ n'efu ma ọ bụ mgbakwunye?A: Ee, anyị nwere ike ị nye ihe nlele ahụ maka akwụghị ụgwọ mana anaghị akwụ ụgwọ ọnụego.Q: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?A: Paykwụ <gwọ <= 1000USD, 100% n'ọdịnihu. Kwụ >gwọ> = 1000USD, 30% T / T tupu, itule tupu mbupu.
Kpọtụrụ anyịỌ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị dị ka n'okpuru:Weebụ: +86 13270253222Weebụsaịtị: www.Atụmatụ: Anyị nwere ike ịme ka ị nwee akara ngosi na ika nwere nnukwu ọnụọgụ.Afọ ojuju gị bụ ebumnuche anyị kachasị mma, nabata ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: excavator sikwuo ike ịrụ ọrụ ịwụ
Osote: excavator ngwa di na nwunye